Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Iindaba zocingo » Ulingo olutsha lweklinikhi luvavanya ukuvuselelwa kwengqondo enzulu ukuNyanga i-Alzheimer's
I-Allegheny Health Network (AHN) oogqirha bajoyine ulingo lwezonyango olubalulekileyo oluphonononga ukhuseleko kunye nokusebenza konyango olunzulu lokuvuselela ingqondo ukunyanga isifo se-Alzheimer. Ekhokelwa nguDonald Whiting, MD, usihlalo we-AHN's Neurosciences Institute, iGosa eliyiNtloko lezoNyango le-AHN, kunye novulindlela ekusebenziseni i-DBS ukunyanga iimeko eziphazamisayo ze-neurological, i-ADvance II Study yinqanaba lehlabathi le-3 uvavanyo lwezonyango olunikezelwa kuphela. kumaziko onyango akhethiweyo kwihlabathi jikelele.
"Siyazi ngokusetyenziswa kwethu kwe-DBS malunga neminyaka engamashumi amabini ukunyanga ukuphazamiseka kwentshukumo efana ne-Parkinson kunye nokungcangcazela okuyimfuneko ukuba inkqubo yonyango olukhuselekileyo nolunyamezelwayo ngokubanzi," watsho uGqr Whiting. Bangaphezu kwe-160,000 abantu kwihlabathi liphela abafumene unyango lwe-DBS kwezo meko.
I-AHN yenye yeziza ezingama-20 kuphela eUnited States ezikhethelwe ukuthatha inxaxheba kuPhononongo lwe-ADvance II oluqhutywa eKhanada naseJamani.
Isifo sika-Alzheimer lolona hlobo luxhaphakileyo lwe-dementia. Kuqikelelwa ukuba i-6.2 yezigidi, okanye omnye kwabasithoba baseMelika abaneminyaka eyi-65 nangaphezulu bahlala ne-Alzheimer's; Ama-72 ekhulwini aneminyaka engama-75 ubudala okanye ngaphezulu. I-Alzheimer's sisifo esiqhubekayo kwaye ekupheleni kwayo, i-neuron kwiindawo ezithile zobuchopho ezenza umntu akwazi ukwenza imisebenzi esisiseko yomzimba, njengokuhamba nokuginya kuyachaphazeleka. Esi sifo siyabulala ekugqibeleni kwaye akukho nyango lwaziwayo.
I-DBS ye-Alzheimer's ibandakanya ukusetyenziswa kwesixhobo esifakiweyo esifana ne-heart pacemaker kunye neengcingo ezimbini ezincanyathiselweyo ezihambisa i-pulses yombane epholileyo ngokuthe ngqo kwindawo yobuchopho ebizwa ngokuba yi-fornix (DBS-f), ehambelana nenkumbulo nokufunda. Ukuvuselela kombane kukholelwa ukuba kusebenze imemori yesekethe kwingqondo ukuze ilole umsebenzi wayo.
Uphononongo olungacwangciswanga, oluyimfama oluphindwe kabini luya kuhlala iminyaka emine kubathathi-nxaxheba, ngamnye kubo uya kungena kuvavanyo oluqhelekileyo lwe-Alzheimer ngaphambi kokuba i-neurostimulator ifakwe. Iziphumo zolu vavanyo lomzimba, lwengqondo, kunye nolwengqondo luya kusetyenziswa njengomlinganiselo osisiseko njengoko zivavanywa rhoqo ngezinga lokuqhubela phambili kwe-Alzheimer kulo lonke ixesha lokufunda.
Ukulandela ukufakelwa, isibini kwisithathu sezigulana ziya kwenziwa ngokungenamkhethe ukuba i-neurostimulator yazo isebenze kwaye isinye kwisithathu siya kuba nesixhobo sabo sishiywe. Izigulane ezinesixhobo esicinyiweyo ekuqaleni kophononongo ziya kusenza sisebenze emva kweenyanga ezili-12.
Kulo lonke ulingo lweklinikhi, abathathi-nxaxheba bokufunda baya kuhlolwa liqela leengcali ze-AHN ze-neurologists, i-psychiatrists kunye ne-neurosurgeons, kuquka uDkt Whiting kunye no-AHN neurosurgeon kunye ne-DBS ingcali uNestor Tomycz, MD.
Ukulungela ulingo, izigulane kufuneka zibe neminyaka engama-65 nangaphezulu, zifunyaniswe zine-Alzheimer's epholileyo, ngenye indlela impilo entle, kwaye zibe nomkhathaleli omiselweyo okanye ilungu losapho eliya kuthi libakhaphe xa besiya kugqirha.
"Iziphumo zezigaba zangaphambili zolu lingo lwezonyango ziyathembisa kwaye zibonisa ukuba unyango lunokuba luncedo kwizigulane ezine-Alzheimer epholileyo ngokuzinzisa kunye nokuphucula umsebenzi wabo wokuqonda," utshilo uGqr Whiting. "Ukuthi isiphumo esiphumeleleyo solu phononongo sinokuguqula ubomi bezigidi zabantu baseMelika abachatshazelwe sesi sifo sibulalayo, asiyonto iphantsi. Sichulumancile ukuba phakathi kwamaqela abalaseleyo otyando kwihlabathi anika abaguli abanesifo i-Alzheimer ukufikelela kolu tshintsho. ”
Ngaphantsi kobunkokeli bukaDkt Whiting, i-AHN ye-Allegheny General Hospital sele iphambili kwimigudu yobuvulindlela yokuqhubela phambili ukusetyenziswa kokuvuselela ingqondo. Isibhedlele saba sesokuqala entshona yePennsylvania ukusebenzisa iteknoloji ukunyanga ukungcangcazela okubalulekileyo kunye neSifo sikaParkinson, kwaye kutshanje, uGqr Whiting kunye neqela lakhe baqala isigaba sesibini solingo lwezonyango lokuhlola ukusebenza kwe-DBS ukunceda ukulawula ukutyeba kwe-morbid.
Oku ngakumbi: isibhedlele | Khanada | eunited States | Pennsylvania
Isigulana sokuqala sithathelwe kuNyango lwe-Osteoporosis eunited States|
UMongameli weHlabathi we-SKAL wazisa ubuNkokheli boKhenketho obutsha kwi-Generation Z kunye ne-Industry 4.0 Khanada|
Ukuhamba kwabakhweli bomoya phakathi kwe-USA kunye neYurophu ukuya kwi-1,003% eunited States|
Iphulo lezoKhenketho laseBrazil libe yiMpumelelo enkulu eunited States|
Ihotele yasePhiladelphia yenza uludwe lweeHotele zeMbali zaseMelika eunited States|
Khanada isibhedlele Pennsylvania eunited States
Ingxelo eNtsha kwiiMpawu zoBusuku kunye nokuSebenza kweMini kubantu abadala abane-Insomnia
INkundla yezoBulungisa ye-EU iMisela iRenti eNfutshane kufuneka iNikezwe...
Into ethile ekhulayo phakathi kwe-Wego kunye...
IiNdwendwe ze-Songtsam zifumana amava amahle ePesika yaseTibetan...
'Impangelo' ayilonyango lweholide...
Uphuculo olubalulekileyo kuBungqongqo beSifo ku...
Ikomkhulu leNkcubeko yaseMpuma yeAsia kunye ne "Sichuan...
IiFayile zeSebe lezoBulungisa ziFayile isibheno sokutshitshiswa kwe...
UKhenketho lwaseSeychelles lusingatha iParrAPI yokuthengisa iBlitz
IiMveliso zeMetal Polish Ujongo lweMarike Ikhava eNtsha...
I-FDA ivume unyango olutsha lwabantwana lwentliziyo eqhelekileyo...
Uzakuzaku oMtsha uza kukwamkela izinto ezongezelelekileyo kwiPlanethi...
I-Lynx Air isungula iinqwelomoya ezintsha eziphuma eSt
Unxunguphalo lweMpilo kwiSandals Emerald Bay Resort kwi...
I-FDA igunyazisa uVavanyo lokuqala lokuxilonga nge-COVID-19 isebenzisa...
IiSolomon Islands zilinde ngolangazelelo kwisigqibo sokuvula kwakhona
IMarike yoThutho lweSikhululo seSikhululo sangaphambi kweNcwadi kulindeleke ukuba...
Ufikelelo oluKhethekileyo kwiZixhobo zokuSebenzisa kwiUrology...
I-UK yongeza iijethi zabucala kwisithintelo sayo sokubhabha eRussia
NgoJanuwari 25, 2022 kwi-08: 17
Umyeni wam wafunyaniswa ukuba unesifo sika-Parkinson ekuqaleni kweminyaka engama-67. Iimpawu zakhe yayikukushukuma kweenyawo, intetho engacacanga, intetho yelizwi eliphantsi, ukuthotywa kokubhala ngesandla, izakhono zokuqhuba ezoyikisayo, kwaye ingalo yakhe yasekunene ibambe i-angle ye-45 degree. Wafakwa kwi-Sinemet kwiinyanga ze-7 kwaye emva koko i-Sifrol kunye ne-rotigotine yaziswa ethatha indawo ye-Sinemet kodwa kwafuneka ayeke ngenxa yemiphumo emibi. Sazama zonke iishoti ezazikhona kodwa akukho nto yayisebenza. Kubekho inkqubela encinci ukuba kukho nayiphi na inkqubela ekufumaneni unyango oluthembekileyo, ndiyekile amayeza am ngenxa yeziphumo ebezingalindelekanga. Umboneleli wethu wasazisa kwiKliniki yezeMpilo yaseKycuyu yonyango lweParkinson. Unyango ngummangaliso. Umyeni wam uchache kakhulu! Ndwendwela i-kycuyuhealthclinic. co m
NgoJanuwari 22, 2022 kwi-17: 15
Umyeni wam wafunyaniswa enesifo i-Parkinsons kwiminyaka emi-2 eyadlulayo, xa wayeneminyaka engama-59 ubudala. Wafakwa kwi-Senemet iinyanga ezi-8 kwaye emva koko i-Siferol yaziswa kwaye yathatha indawo ye-Senemet, ngeli xesha lexesha wafumanisa ukuba unesifo sengqondo esiyingozi. Waqalisa ukuba nemibono, waphulukana nokunxibelelana naye. Ekrokrela ukuba liyeza ndamkhupha kwi-Siferol (ngolwazi lukagqirha) kuye kwi-PD yendalo ye-herbal formula esiyi-odole kwi-TREE OF LIFE HEALTH CLINIC, iimpawu zakhe zehla ngokupheleleyo kwiiveki ze-3 zokusetyenziswa kwe-TREE OF LIFE HEALTH I-Parkinson's disease yendalo. ifomula yemifuno. Ngoku uphantse abe ngama-61 kwaye uqhuba kakuhle kakhulu, isifo sibuyiselwe umva! (ww w. treeoflifeherbalclinic .com)